Tuesday October 06, 2020 - 06:11:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Maali ayaa sii daysay in kabadan 206 maxbuus oo mujaahidiin ah kadib markii ay heshiis maxaabiis iswaydaarsi ah lagaartay Jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam Walmuslimiin.
Masuuliyiinta Mali ayaa xabsiga kasii daayay ugu yaraan 190 maxaabiis mujaahidiin ah oo ku xirnaa jeel kuyaala magaalada caasimadda ah ee Bomako waxaana loo duuliyey deegaanno ay gacanta ku hayaan jihaadiyiinta oo kuyaal waqooyiga wadanka.
Mas'uul sare oo katirsan melleteriga Maali ayaa xaqiijiyay in ay sii daayeen maxaabiis boqolaal ah taas oo sii xoojineysa wararka la isladhexmarayo ee ku saabsan in jhaadiyiintu ay dhankooda sii daayeen siyaasi caan ah oo lix bilood ka hor ay ka qafaasheen waqooyiga Maali.
Rag aad u hubaysan oo katirsanaa Al Qaacidada Saaxilka ayaa qafaashay Soumaila Cisse dhamaadkii bishii Maarso ee lasoo dhaafay kadibna waxay dalbadeen in ay maxaabiis isweydaarsadaan iyaga iyo dowladda Mali ugu dambayntiina waa ku guulaysteen hadafkoodi.
Sarkaal diiday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in maalintii Sabtiga ay sii daayeen illaa 70 Maxbuus mujaahidiin ah halka maalintii Axadda ay sii daayeen 110 maxbuus, saraakiisha dowladda Maali ayaa aad uga gaabsanaya ka hadalka arrinkan sababa laxiriira xasaasiyadda uu leeyahay.
Ninka loo sii daayay xukuumadda Maali ee lagu magacaabo Cisse waa 70 jir u tartamay madaxtinimada Mali muddo seddex jeer ah wuxuu olole ugu jiray ka hor doorashooyinka baarlamaaniga ah meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Timbuktu balse waxaa si lama filaan ah uqafaashay dagaalyahanno wajiyadu u xiranyihiin. ilaaladiisa ayaa lagu dilay weerarka, mudadii lixda bilood aheyd ee uu ku jiray gacanta mujaahidiinta in uu noolyahay waxa kaliya ee caddaynayay ayaa ahaa warqad uu gacantiisa ku qoray oo uu usoo diray saraakiisha Melleteriga bishii Agoosto ee lasoo dhaafay.
Inkasta oo wali uusan wax war ah kasoo bixin hoggaanka Jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin hadane taageerayaashooda baraha bulshada ayaa xaqiijiyay in maxaabiista loosii daayay ay gaarayaan 206 dagaalyahan iyagoo aad u bogaadiyay tallaabadan waxayna ugu baaqeen jamaacaadka kale ee jihaadiga ah in ay dadaalkan oo kale bixiyaan si xabsiyada loogasoo daayo geesiyaasha ku jilba xiran